गाईको मासु खान सरकारी निकायले नै गरे प्रचार – ताजा समाचार
गाईको मासु खान सरकारी निकायले नै गरे प्रचार
काठमाडौं । सरकारले दशैंमा स्वच्छ र स्वस्थ मासु खान सचेत गराउने गरेको छ । दशैं नजिकिँदै जाँदा सरकारले यस वर्ष पनि सार्वजनिक सूचना निकालेर सफा, स्वच्छ र स्वस्थ मासु खान भनेको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुसेवा विभागले विभिन्न माध्यमबाट स्वच्छ र स्वस्थ मासु खान सचेत गराएको छ । यसरी सचेत गराउँदा विभागले ‘बधशालादेखि भान्सासम्म स्वच्छ र स्वस्थ मासु’ लेखेको ब्रोसरमा राष्ट्रिय जनावर गाईको समेत तस्विर राखेर मासु खान गरेको प्रचारको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
गाईलाई राष्ट्रिय जनावरमात्रै नेपालमा रहेका बहुसंख्यक हिन्दूहरुको पूज्य जनावर पनि हो । तर, विभागले गाईको तस्विरसहित स्वच्छ र स्वस्थ मासु खान गरेको प्रचारले हिन्दू धर्मावलम्बीको मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीको आस्थामाथि आघात पुगेको छ । केही दिन अघि सुर्खेतमा दशौं गाईको भीरबाट लडाएर निर्ममहत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै सरकारी निकायबाट भएको सो प्रचारको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ भने मंगलबार अपरान्ह ३ बजे पुल्चोकस्थित हरिहरभवनस्थित विभागको कार्यालय परिसर पुगेर हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका भएका छन् ।
यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले पनि सामाजिक सञ्जालबाट विरोध जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारको लोगोमा सरकारी कार्यालयले मासुको विज्ञापनमा गाई कसरी छापिन दिन पुग्यो ? यो सही गलत फोटो के हो ? सरकारले तुरून्तै छानबीन गरेर दोषी भेटिए कार्यवाही गरोस्। यस्ता लापरवाही भएको हो भने क्षम्य हुँदैनन्।’
प्रकाशित भएको : September 24th, 2019